Ubungakanani be-powder VS Cetilistat powder | AASarw steroid powders
/Blog/cetilistat , ukutyeba/I-powder Obesity powder VS Cetilistat powder
ezaposwa ngomhla 12 / 01 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo cetilistat, ukutyeba.
Yintoni i-Obesity powder?
ukutyeba yimeko apho umntu eqokelele amaninzi amaninzi omzimba ukuze abe nempembelelo embi kwimpilo yawo. Ukuba umzimba womzimba ubuncinane i-20% ephakamileyo kunokuba kufanelekile, yena uthathwa njengobunzima. Ukuba i-Body Mass Index (BMI) iphakathi kwe-25 kunye ne-29.9 uthathwa njengongaphezulu komzimba. Ukuba i-BMI yakho i-30 okanye ngaphezulu kwakho ithathwa njengobunzima.
Ukunyanyiswa kweyona nto ibangela ukuba kuphelelwe ukufa emhlabeni jikelele, kunye namazinga akhula kubantu abadala kunye nabantwana. Kwi-2015, abantu abadala be-600 (i-12%) kunye ne-100 abantwana abayizigidi babedlulele. Ubutyebi buyinto eqhelekileyo kubasetyhini kunamadoda. Iziphathamandla zijonge njengenye yeengxaki zezempilo zikawonke-wonke ze-21st.Inkohlakalo ihlaselwe kwiindawo ezininzi zehlabathi (ngokukodwa kwihlabathi leNtshona), nangona kubonwa njengophawu lobuncwane kunye nokuvelisa ngamanye amaxesha kwimbali kwaye kusekho kwezinye iindawo zehlabathi.Ku-2013, i-American Medical Association yabonisa ukukhuluphala njengesifo.
Isizathu sokwakheka komzimba
Ubungakanani bomzimba ixhaphake ngokuqhelekileyo ngokubambisana nokudla okudliwayo, ukungabi nento yokusebenza ngokomzimba, kunye nokuthinteka kwemvelo. Iziganeko ezimbalwa zibangelwa ngokuyinhloko ngamajeni, izifo ze-endocrine, imithi, okanye ingxaki yengqondo. Umbono ogqithiseleyo abantu badla amancinci kodwa usenokufumana ubunzima ngenxa yecetabolism esicothayo ayixhaswanga ngokubanzi. Ngokomyinge, abantu abagqithisileyo banenkcitho enkulu kunamalungu abo aqhelekileyo ngenxa yamandla adingekayo ukuze kugcinwe ubunzima bomzimba obandayo.
Uphando lucebise ukuba ukuba ungalali ngokwaneleyo umngcipheko wokuba ukhuluphele kabini. Uphando lwenziwe eWarwick Medical School eYunivesithi yaseWarwick. Umngcipheko usebenza kubantu abadala kunye nabantwana. UNjingalwazi uFrancesco Cappuccio kunye neqela lihlalutye ubungqina kwizingane ze-28,000 kunye nabantu abadala be-15,000. Ububungqina babo babonisa ngokucacileyo ukuba ukulala kokulala kubaluleke kakhulu kwandisa umngcipheko wokukhuluphala kumabini omabini.
Ubungozi bokupheka komzimba
Isisindo somzimba esithinteleyo sinxulumene nezifo ezahlukahlukeneyo kunye neemeko, ngokukodwa izifo zesifo senhliziyo, isifo sikashukela se-2, ukuphazamiseka kokuphazamiseka kokulala, iintlobo ezithile zomhlaza, i-osteoarthritis ne-asthma. Ngenxa yoko, ukuthobeka kuye kwafunyanwa ukunciphisa ixesha lokuphila.
Indlela yokusombulula ingxaki yokukhuluphala?
Ubutyebi bukhuseleke kakhulu ngokuhlanganiswa kweenguqu zentlalo kunye nokukhetha kokhetho. Utshintsho ekudleni nasekusebenziseni iipilisi eziphambili. Umgangatho wokutya unokuphuculwa ngokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi amdaka, njengalawo aphezulu amanqatha kunye neeshukela, kunye nokunyusa ukutya kwefayibha. Imveliso ingasetyenziselwa, kunye nokutya okufanelekileyo, ukunciphisa ukutya okanye ukunciphisa amanqatha Ukutya. Ukutya, ukuzivocavoca, kunye namayeza ayisebenzisekanga, ibhaluni yegastric okanye utyando lunokwenzelwa ukunciphisa umthambo wesisu okanye ubude bamathumbu, okukhokelela ekubeni uzive uphelile okanye unciphise amandla okufumana izondlo ekudleni.
Cetilistat powder VS Ubunzima
Cetilistat powder eluhlaza isisindo sokulahlekelwa kwesisindo esetyenziselwa ukudibanisa ne-calorie ephantsi yokutya. Isebenza ngokuthintela inani elikhulu lamanqatha ukusuka ekutyiweyo kunye nokufakwa emzimbeni. Eli liyeza lihlelwa njenge-lipase inhibitor kwaye lisebenza ngokuthe ngqo kwi-digestive system apho lithintela isenzo se-lipolytic enzyme ebizwa nge-lipase. Ezi lipases yinto umzimba osetyenziswayo ukugaya amanqatha. Nangona kunjalo, xa eli liyeza lilawulwa kunye nomtya, libophezela kwi-lipases, ngaloo ndlela libavimbela ukuba bangaphuli amanqatha. Amafutha angenayo i-hydrolyzed esikhundleni salolu hlobo, adala ukunyuka kwamafutha e-fecal nokunciphisa amafutha. Xa zisetyenziselwa kunye nokunciphisa i-calorie yokutya, kunokunceda ukuphucula ukulahleka kwesisindo kunye nokwenza kube lula ukuba izigulane ezigqithiseleyo zibuye zibuyiselwe, ngoko kukuphucula amathuba okulahleka kwesisindo.
I-Cetilistat powder dosage
I-Cetilistat inikezwa njenge-capsules ze-60mg zamandla zolawulo ngomlomo. Iyeza lithathwa ngokutya ukuqinisekisa ukuba lisebenza ngelixa ukutya kukugaya, ukwenzela ukuba ukuxutywa kwamafutha ukusuka ekudleni kunokunciphisa ngempumelelo. Ugqirha wakho uya kukucebisa malunga nokuba uncedo olunjani lwamachiza ukuthatha kunye nomthamo ngamnye, kwakunye nemilinganiselo efunekayo yemihla ngemihla. Kubaluleke ukuba uhambelane nale miyalelo. Musa ukuthatha okungaphezulu kunokuba ugqirha wakho akuxelele ukuba uthathe.
Nangona i-Cetilistat powder eluhlaza ingabancedisa izigulane ezingaphezu kwesisindo sokunciphisa umzimba kwaye ngoko ukunciphisa umngcipheko wesifo sikashukela okanye ezinye iimeko ezinzulu ezinxulumene nokukhuluphala, uya kukwacetyiswa ngugqirha wakho ukuba adle ukutya okuncinci khalori kwaye usebenzise rhoqo.
I-Cetilistat powder effect effect
Izigulana ezithatha unyango lokunyanyisa nge-Cetilistat powder zingabangela iziphumo ezibi. Kumele uxelele ugqirha wakho ukuba oko kwenzeka. Ezinye izibonelo zinikwe apha:
I-steatorrhea (iigesi ezinamafutha)
Ukutshintshwa kweengubo zangaphantsi
Iingxaki zokulawula ukuhamba kweembilini
tags: ukuthenga i-Cetilistat powder, ukuthenga i-Obesity powder, Cetilistat powder, Ubungakanani bomzimba
I-hormone ye-Sex Improvement Male I-Jinyang Alkali powder	Iimpembelelo zeLorcaserin: Ingaba i-Lorcaserin powder iyasebenza ngokwenene ukulahlekelwa yintlungu?